NSK Olimpijs’kyj — Kyiv (Kiev) မှာ ဗိုလ်ရွေးမယ့်ည | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » NSK Olimpijs’kyj — Kyiv (Kiev) မှာ ဗိုလ်ရွေးမယ့်ည	28
NSK Olimpijs’kyj — Kyiv (Kiev) မှာ ဗိုလ်ရွေးမယ့်ည
သည်ကနေ့ 1.7.2012 တနင်္ဂနွေည (သို့ မဟုတ်) တနင်္လာနံနက်မှာ ကန်ကြမယ့် ၊ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များ စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ ယူရို၂၀၁၂ ဗိုလ်လုပွဲကြီးဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ ကြည့်မြင်ကြရတော့မှာပါ ။
““စပိန်”” နဲ့ ““အီတလီ”” အသင်းတို့ တွေ့ ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သည်နှစ်သင်းဟာ အုပ်စု စီ မှာ စပိန် အသင်းဟာ ၂ပွဲ နိုင် ၁ပွဲ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး၆ ပေးဂိုး၁ နဲ့အုပ်စုဗိုလ်
အီတလီ အသင်းဟာ ၁ပွဲ နိုင် ၂ပွဲ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး၎ ပေးဂိုး၂ နဲ့ အုပ်စုဒုတိယ အနေနဲ့ တက်လာကြတာဖြစ်ပြီး ၊ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပြန်လည်တွေ့ ကြတာပါ ။
စပိန်အသင်းဟာ အုပ်စုအားနဲ့ ခြုံကြည့်ရင် ရဂိုးအများဆုံးနဲ့ ပေးဂိုးအနဲဆုံး အနေအထားမှာ တစ်သင်းထဲ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ် ။
စပိန် အသင်းဗိုလ်လုပွဲသို့ ချီတက်လာရာ လမ်းကြောင်းကတော့
14.6.2012 စပိန် ၄-၀ အိုင်ယာလန်
23.6.2012 စပိန် ၂-၀ ပြင်သစ် (ကွာတားဖိုင်နယ်)
27.6.2012 ပေါ်တူဂီ ၀-၀ စပိန် (ပင်နယ်တီတွင် စပိန်နိုင်)
အီတလီ အသင်းဗိုလ်လုပွဲသို့ ချီတက်ခဲ့ရာ လမ်းကြောင်းကတော့
14.6.2012 အီတလီ ၁-၁ ခရိုအေးရှား
18.6.2012 အီတလီ ၂-၀ အိုင်ယာလန်
24.6.2012 အင်္ဂလန် ၀-၀ အီတလီ (ပင်နယ်တီတွင် အီတလီနိုင်)
28.6.2012 ဂျာမနီ ၁-၂ အီတလီ (ဆီမီးဖိုင်နယ်)
စပိန်အသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် အာဘီလိုအာ ၊ ပီကေး ၊ ရာမို့ စ် ၊ အယ်ဘာ
လယ် ဇာဗီ ၊ ဘက်စ်ကွက် ၊ အလွန်ဆို
ရှေ့ဆေးလ်ဗာ ၊ ဖာဘရီဂတ် ၊ အင်နီယေစတာ
အီတလီအသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများကတော့
နောက် အဘိတ် ၊ ဘာဇာဂလီ ၊ ချီလီနီ ၊ ဘယ်ဇာရက်တီ
လယ် မာချီစီယို ၊ ပီယာလို ၊ ဒီရော့စီ
ရှေ့ဘလော့တယ်လီ ၊ ကတ်ဆာနို
စပိန် နဲ့ အီတလီ တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများကို ပြန်ကြည့်ရင်
10.8.2011 အီတလီ ၂-၁ စပိန် (ခြေစမ်းပွဲ)
22.6.2008 စပိန် ၄-၂ အီတလီ (ယူရို၂၀၀၈)
26.3.2008 စပိန် ၁-၀ အီတလီ (ခြေစမ်းပွဲ)
သည်နှစ်သင်းရဲ့ လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွာခြားချက်အကြီးစားတော့ မရှိပါဘူး။ ၂သင်းစလုံးဟာ ဂိုးမပေးရရေးကို အဓိကထား ကစားခဲ့တာကို တွေ့ ရပါတယ် ။ တစ်ခုရှိတာကတော့ စပိန်အသင်း ဟာ ပေါ်တူဂီနဲ့ တွေ့ တုန်းက ခြေမျိုးနဲ့ ဆိုရင်တော့ သည်နေ့ ညပွဲမှာ ကာလာမလှနိုင်ပါဘူး ။ အီတလီ အသင်းဟာ အုပ်စုပွဲစဉ်တုန်းက စပိန်နဲ့ ၁-၁ တွေ့ ခဲ့တုန်းက ခြေစွမ်းတူ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ၊ ကျန်အုပ်စုပွဲ၂ပွဲမှာ သူတို့ ခြေဟာ ပုံမှန်အဆင့်လောက်ဘဲ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဂျာမနီ အသင်းကို ၂-၁ နဲ့ နိုင်တဲ့ ပွဲမှာတော့ ချန်ပီယံခြေ ပြနိုင်ခဲ့တာတွေ့ ရပါတယ် ။ ဂျာမနီ နဲ့ ပွဲတုန်းက ခြေမျိုးကို သာ ဆက်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ၊ သည်နေ့ ညပွဲမှာ အီတလီ အသင်းဟာ သရေ အနိမ့်ဆုံးကန်နိုင်ပါတယ် ။
ယူရို၂၀၀၈ နဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ချန်ပီယံ စပိန်ဟာ သည်နေ့ ညပွဲမှာ ထပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ ယူရို ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲမှာ ၂ကြိမ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲတဲ့အသင်းအဖြစ် စံချိန်အသစ်တင်နိုင်မှာပါ ။
ဈေးအနေအထားအရ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်တုန်းက အာရှမှာ စပိန်ဟာ သရေအရှုံး ဖွင့်ခဲ့တာကနေ ၊ အခု သည်ပို့ စ်ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ စပိန်ဟာ သရေကို ငါးဆယ်ရှုံး ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါဟာ အီတလီ ဘက် ကို အားပေးတာများနေလို့ စပိန်ဈေးကျသွားတဲ့သဘောပါ ။
ဂိုးဈေးကတော့ သည်ပို့ စ်ကို စရေးနေတဲ့အချိန်မှာတုန်းက ၂ဂိုး ၅၀ အရှုံးအနေအထားဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ သည်ပို့ စ် ကို ရေးပြီးခါနီး အချိန်မှာ ၂ဂိုးသရေ ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒါဟာ ဂိုးအနဲ ဘက် ကို အားပေးတာများလို့ ပါ ။
အာရှဘက်က ခန့် မှန်းချက်များကတော့ “အီတလီ” ကို အားပေးဖို့ ညွှန်းထားပြီး ၊ ဥရောပဘက်က ဝက်ဆိုက်များကတော့ “စပိန်” အနိုင် ၁-၀/၂-၁ လို့ ခန့် မှန်းပေးထားပါတယ် ။
ကျုပ်မောင်ပေ အနေနဲ့ သည်ဘက်ကဈေးကို မသိရသေးလို့ ၊ ဘယ်အသင်းကို ဈေးခေါ်သူများက အနိုင်ခန့် မှန်းထားသလဲ ဆိုတာ မတွက်နိုင်သေးပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့်မို့ ၊ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားလေးတွေ ကို ဘဲ ရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ညပိုင်းကြမှ ၊ သည်ပို့ စ်မှာဘဲ အက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပြီး တစ်ခါ ၊ ကွန်မင့်ဖြင့်တစ်ဖုံ ပြန်ပြီး ရေးပါဦးမယ် ။
စာဖတ်သူများရဲ့ စိတ်ကြိုက်အသင်း ကို လဲ သိခွင့်ပြုပါနော။
မောင် ပေ has written 383 post in this blog.
အိုင် ဒုန့် လိုက်ခ် ကော် ပီ
surmi says: စောင့် နေတာကြာပြီဗျ
ကြိုက်တာကတော့အောက်ပဲဗျို့ 
သို့ သော်လည်း ဈေးသိပ်ကျရင်တော့အပေါ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားမှတ်တယ်
ညဈေးကြည့် သေးတာပေါ့ 
စိတ်ထင် မိနစ် ၉၀ နဲ့  ပြတ်မယ်ထင်တာဘဲ
မောင်ပေ says: အီတလီ နဲ့ စပိန်
အီတလီ က ပိုပြီး ခံစားအားပြု ကစားမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
စပိန်တိုက်စစ်မှာ “ဘီဘာအို” အသင်းတိုက်စစ်မှူး “လော်ရန်တေး” ကို သုံးရင်ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
““ ဂိုးအနဲ ”” ဟာ အောင်မြင်ဖို့ ၅၀% အထက်မှာ ရှိနေတာ အသေချာပါဘဲ ။
ahnyartamar says: ကိုပေရေ…အီတလီက ခံစစ်ကစားရာမှာ စပိန်ထက်ပိုတော်တယ်နော်။ ဒါကြောင့် ဂိုးအောက်နဲ့ အီတလီကိုပဲ ကြိုက်တယ်ဗျို့
ဖိုးထောင် says: အန်ကယ်ဦးပေ အီတလီနိုင်မယ်ထင်တယ်
maung khinmin says: လေးစားတယ်ဆြာပေ….ဗိုလ်ရွေးခံမယ်ဆိုလို့ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့….
မောင်ပေ says: ကျုပ်လဲ ဆြာခင့်ကို ၄စားသွားဘီ
ကျုပ် ဆြာခင့်ကို ခင်သလို .. ဆြာခင်က ကျုပ်ကို တဖန်ပြန်ခင် လို့
ဘဲဥ says: စပိန်ကို ပုံအောလိုက်တော့မယ်ဗျာ ………….
အရီး Khin Latt says: မောင်ဂီ နဲ့ ကြောင်ဝလေး တို့ တော့ အသဲကွဲ ကာ နီးပြီ။
မောင်ဂီ က ပိုဆိုးမှာ။ ဘီဘီ နဲ့ ပါ လွဲမှာမို့။ :D
Azzurri says: ငိုဇယာလား … မငိုပါဘူး…
ဂလောက် မြန်တဲ့အသင်း ကို အမြန်ဆော့မှတော့ နားကားပီပေါ့…
အုပ်စုပွဲတုံးက ပုံစံအတိုင်း ၂ဂိုးတောင် ပေးလိုက်ရတာလည်း
အမှတ်မရှိလို့ ခံရတာ …. ဟွန့် ….
အော်… အဲ့လိုနဲ့ …ကျုပ်တောင် သုံးဇယ် နား နီးပါပေါ့လား …
ကြောင်ဝတုတ် says: ၂-၀ ပထမပိုင်းတဲ့
အရီး Khin Latt says: အမျှ၊ အမျှ၊ အမျှ ကြောင်ဝလေး အသဲ :P
အရီး Khin Latt says: Ohhh Oh..
အရီး Khin Latt says: Oppsss.. one more Goal.
နံပါတ် (၁၉) ခမျာ ငို နေတာ မှ တော်တော် နဲ့ မရပ်ဘူး။ စပိန် က ကလေးလေး တွေ စပိန်ဝတ်စုံ တွေ နဲ့ ကွင်းထဲ မှာ ရောက်လာပြီ။
ပြေးပြီး သူတို့ ကို ဓာတ်ပုံရိုက်။ ချစ်စရာ့ အရွယ် မှာ ဝင်ပြိုင် လိုက်ချင်သေး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1287
ကြောင်ဝတုတ် says: ကျွန်တော်လဲ ငိုချင်နေတာနော် လက်မတို့ပါနဲ့
အဘလစ်ပီရေ ရှင်ကတော့ အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတယ်
အရီး Khin Latt says: ကဲ ကဲ နောက်မှ အသဲကွဲ အခုတော့ အိပ်တော့။ ;-)
အရှေ့ကျွန်းမင်းသား လဲ စောစောစီးစီး မျက်ရည် နဲ့ မျက်နှာသစ်နေလောက်ပြီ။ :D
ကြောင်ဝတုတ် says: နက်ဖြန် အဇူရီဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်
Was this answer helpful?LikeDislike 5598
Azzurri says: ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ၁၄ရက်နေ့ တိုကီယို သွားမယ် ..ဒါဗျဲ….
လိုက်ချင်လိုက် မလိုက်ချင်နေကြ …
ဖက်ပီးငိုဖို့ ပခုံး တဖက်ကို ငှားပါလေ ….
အိုဘယ့် … မရှိခန ဒို့ မမ ရယ်…
Was this answer helpful?LikeDislike 1287
ကြောင်ဝတုတ် says: အဇူရီရေ-
ဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့် ထင်တိုင်းမပေါက်ခဲ့တာကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်
ငါကတော့ အဇူရီရဲ့ ထာဝရပရိတ်သတ်ပါ
ဂုဏ်ယူပါတယ် အဇူရီ ယူရို၂၀၁၂ ဒုတိယဆုရှင်
အရီး Khin Latt says: အီတလီ အသင်းသား တော်တော်များများ သူများ လက်ထဲ ပါသွားတဲ့ ဖလား ကို ကြည့်ပြီး ငိုနေကြတယ်။
“The Best Team Win” ပါဘဲ လို့ တွေးလိုက်ပါတယ်။ :-)
ကြောင်ဝတုတ် says: မငိုပါနဲ့ကွယ်
ကြိုးစားဖို့ အချိန် နှစ်နှစ်ရပါတယ်
Azzurri says: အနှီဆင်းန်းဒွေ မကြည့်ချင်လို့ …တီဗီပလပ်ကို ခြေညှိုးခြေမ ညှပ် ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ …ဘွ …
ahnyartamar says: အီတလီလည်းကွဲ၊ ကျတော်လည်းရူံး ဟားဟားဟား………
အလင်းဆက် says: ဟုတ်ကဲ့ …
မောင်ပေ says: မနေ့ညက ရွာထဲကို လုံးဝ ဝင်လို့မရခဲ့ပါ
ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုသွားသူအားလုံးနှင့် ကွန်မင့်များ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သော မိတ်ဆွေအားလုံးအား လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
htoosan says: သူကြီးဆာဗာ အတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီလားမသိ ။ ကျွန်တော်လည်း ၀င်မရပါ ။ အခြားဆိုဒ်များဝင်၍ ၇ပါသည်။
water-melon says: https://ctunnel.com/ နဲ့ဝင်ကြည့်ပါတော်
Mလုလင် says: စပိန် အသင်းက လူတွေ မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ဗျာ .. မှော်ဆရာ တွေ မှော်အတတ် နဲ့ ပြုစားနေသလိုပဲ … ပထမ တစ်ဂိုး .. နောက် .. တစ်ဂိုး .. အဲ့ဒီ့ ထဲက သိပြီးသား .. .. ခုတော့ Euro ရာဇ၀င် ကိုချိုးဖျက်လိုက်ပုံများ … လွှတ်အားရ စရာ ကိုးဗျ …. လေးစားပါတယ် စပိန်။ မိနစ် ၅၀ ကျော် သွားတော့ ကြည့်ရင်းနဲ့ အီတလီ တွေကို အားတောင် နာလာတယ် … အတည်ပြောဒါဘာ …။
ပစ်စလက်ခတ် မျက်ရည် says: မျက်ရည် မဆဲ ပါဘူးဆိုမှ….
Comments By Postအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - မောင် ပေတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - မောင် ပေ - ရွှေတိုက်စိုးမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - မောင် ပေ - Mr. MarGaအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - Mr. MarGa - အရီးခင်လတ်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Lay Paiသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - Mr. MarGa - KZမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Mr. MarGaရထား ထွက်တော့ မယ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအဟံ ပထမံ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Phoe Thitsarသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အရီးခင်လတ် - Phoe Thitsarလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - အရီးခင်လတ် - မွေ့ကေသာအိပ်မက်မင်းသမီး - Phoe Thitsar - KZနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Mobile13 - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - Mobile13 - အရီးခင်လတ်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ကြောင်ဝတုတ်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - အရီးခင်လတ် -etoneရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Ma Ei - ဦး ကျောက်ခဲမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦး ကျောက်ခဲ - ko pauk mandalayEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77892 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66748 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59015 Kyats )MaMa (57851 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews